Isahluko sokuqala ulwazi olusisiseko lwelaphu
Iyadi enye (Y) = 0.9144 M (M) 1 intshi (1 “) = 2.54 CM (CM) 1 iyadi = 36 intshi 1 iponti (LB) = 454 g (g) 1 ounce = (OZ) = 28.3 g (g) )
Ii. Inkcazo yenkcazo:
Inombolo kaDenny: ibhekisa kubukhulu bomsonto omde osisiqwengana, oko kukuthi ubude beemitha ezingama-9000 zomsonto, ubunzima bayo yigram e-1 (g), edla ngokuchazwa njenge-1 Dan, emelwe ngoonobumba besiNgesi “D”. Umzekelo, umsonto ongama-9,000m ubude, onobunzima obuyi-70 gram, uchazwa njengo-70 Dan. Isetyenziselwa ukumela ubukhulu beekhemikhali.
2. Inani leemicu kunye noxinano lwe-warp kunye ne-weft: limela ubuninzi belaphu, okt inani lemicu ye-warp kunye ne-weft nge-intshi nganye yesikwere, emelwe ngoonobumba besiNgesi “T”. Nika ingqalelo kwinani lenani lohlalutyo lwendlela yokuluka kwamalaphu, fumana umthetho ohambelana nokuluka, ukuze ulinganise ngokuchanekileyo inani lenani.
3. Inani F: intambo nganye yokuluka okanye umsonto weft ubunjwe yimisonto emininzi. Inani u-F limele inani lemicu kwi-warp okanye i-weft yarn, emelwe ngoonobumba besiNgesi “F”. Ngokwahlukileyo, isandla sibhitya, kunzima.
4, ukutyeba kolu luhlu luxhaphakileyo: ngokubanzi, ukusetyenziswa "komsonto", oko kukuthi, iponti yentsimbi yomqhaphu ubude beeyadi ezingama-840, lo msonto ubizwa ngokuba ngumsonto, nonobumba wesiNgesi u "s", onje nge 21 umsonto uneminyaka engama-21. (emva kokuguqulwa: 21S = 250D)
5. Ukumelwa kwengcaciso:
Warp ubukhulu / F × weft ubukhulu / F
Inani lomsonto we-warp + inani lomsonto weft
× 60 "inokushwankathelwa ukuya kwi-70D × 190T × 60"
I-118 t + 80 t
3. Ukuhlelwa kwelaphu:
Ukwahlula ngokwendalo (ulwahlulo oluqhelekileyo lumi ngolu hlobo lulandelayo)
Iifayibha zingahlulwahlulwa zibe yimicu yendalo kunye neentsinga zokwenziwa ngokweepropathi zazo. Iintsinga zendalo zibandakanya umqhaphu wesilika, iflakisi, uboya, njl., Ngelixa iintsinga ezingezizo ezomsebenzi zibandakanya i-nylon, i-polyester, i-acetate, njl.
Inayiloni b. Inayiloni c. Nylon d. Inayiloni Inayiloni yahlulwe yabe “nylon 6 ″ kunye“ nylon 66 ″. "Inayiloni 66" iipropati ezahlukeneyo zibhetele kune "nylon 6", ixabiso liyabiza. Phantsi kweemeko eziqhelekileyo, kunye nomlilo ukukhupha umsi omhlophe, unuke uhlobo oluthile lwesinaphi. Ihlala idayiwe ngedayi yeasidi.
B, iPolyester: IsiNgesi yi "Polyester", ngokubanzi ichazwa njengo "T". Phantsi kweemeko eziqhelekileyo, ngomsi womlilo (kodwa kananjalo naka ingqalelo, emva kweglu yenayiloni ngenxa yesizathu, ukutshisa nako kube ngumsi omnyama, ke naka ukwahlula), ukutshisa ngokukhawuleza, kunuka ivumba elibi. Ukusasaza idayi kudla ngokusetyenziselwa ukudaya. Ukuqwalaselwa kufuneka kuhlawulwe kutshintsho lombala kunye nokukhawuleza kwe-sublimation.
C. Umqhaphu d. Umqhaphu phantsi kweemeko eziqhelekileyo, ngomlilo, isantya esivuthayo siyacotha, ilangatye limthubi, umqhaphu utshisa incasa esiqhelene nayo. Uthuthu lomqhaphu wendalo lumhlophe. Uthuthu lweRayon ikakhulu lumnyama, kodwa zonke zinencasa efanayo. Ngokwesiqhelo idayiwe ngedayi esebenzayo okanye ethe ngqo.
D) iintlobo eziphothiweyo ezifana ne: polyamide / ipholiyesta edibeneyo (N / T), i-polyamide edibeneyo (T / N), i-polyamide edibeneyo (N / C), i-polyamide edibeneyo (C / N), i-polyester / ikotoni edibeneyo (T / C) , umqhaphu-ipholiyesta interwoven (C / T) kunye nezinye iintlobo ifayibha ephothiweyo. Umzekelo, "N / C" imele "warp yinylon, weft ngumqhaphu", "C / N" imele "warp ngumqhaphu, weft yinayiloni". Kwaye nangokunjalo.
Ewe, kukwakho nefayibha ye-acetate, uboya, isilika ye-hemp kunye nezinye iintsinga, kukwakho nemixube, kukho i-Tencel fiber (i-English Tencel, enamagqabi njengezinto ezibonakalayo ze-viscose fiber).
2. Ukuhlelwa ngokweendlela zokuluka:
Ngokwendlela yokuluka, yahlulahlulwe yaba lilaphu elilukiweyo, ilaphu elinithiweyo nelaphu elingalukwanga, elinokuphinda lahlulwe ngolu hlobo lulandelayo:
A. ukunitha: kuhlala kukho ukunitha okujikelezayo kunye nokunitha kwewarp
B. Ilaphu elilukiweyo: eli laphu lenziwe ngemisonto ephothiweyo kunye nemisonto ye-weft. Ngokweendlela ezahlukeneyo zokufaka i-warp kunye ne-weft, inokwahlulahlulwa ibe yi-Taffeta, Twill, Sattin kunye ne-Dobby, njl. (Qaphela: ukuluka okucacileyo, i-Twill kunye ne-satin weave zi "izicubu zantlandlolo ezintathu" zelaphu), kwaye kwangelo xesha, ziya kudityaniswa kwi-warp okanye i-weft ukwenza iipateni ezahlukeneyo. Ngamafutshane, kukho iintlobo ezininzi zotshintsho, ekufuneka zifundwe kwaye zifezekiswe emsebenzini osebenzayo.
C. Ilaphu elingalukwanga: lenziwa ngokubambelela ngokuthe ngqo kunye nokucinezelwa kwemicu ngaphandle kokulukwa.
A, FDY, DTY, ATY. Imveliso ephothiweyo ye-FDY yinylon, ipholiyesta, ilaphu le-FDY Oxford; Iimveliso ezilukiweyo ze-DTY zibandakanya umsonto wasentwasahlobo, uboya beepesika, amalaphu e-Oxford aphantsi, njl njl. I-ATY isetyenziselwa ikakhulu ukuluka ii-turrets. Kukho izitayile ezixutywe kwezi zingentla ukuvelisa iziphumo ezahlukeneyo.
B, ukukhanya kwesiqingatha, ukuphela kunye neflash. Ukukhanya okungaphelelanga kuyimveliso yendalo ngakumbi, ukuba akukho lonyango lukhethekileyo, ifayibha ngokubanzi iyisibane sokukhanya; Ukupheliswa kwenkqubo yemveliso yefayibha ukongeza imveliso ye-titanium oxide, ukuze eli laphu lisondele kwisiphumo sefayibha yendalo, ubuhle obutofotofo ngakumbi; I-Flash yimvakalelo yokukhanya ebonisa imicu ngexesha lokuveliswa kwefayibha ngokwenza ukuba amacandelo awo abe ngoonxantathu okanye ngokuwugudisa umphezulu wemicu.
4. Iindidi eziqhelekileyo zelaphu:
1, Taffeta: inayiloni Taffeta ziyatyeba, ipholiyesta Taffeta, polypolyester exutywe Taffeta, imeko ngokubanzi: umsonto ulungile, ilaphu umphezulu ukukhanya kwaye egudileyo, noko obhityileyo, ezifana: nenayiloni 70D × 190T, 210T, 230T; Nylon 40D × 290T, 300T, 310T; Ipholiyesta 75D * 190T, 68D * 190T; Polyamide ipholiyesta ephothiweyo 40D × 50D × 290T, njalo-njalo iqhele yenziwe ngomsonto we-FDY.
2. I-Oxford: i-nylon Oxford, i-polyester Oxford kunye ne-tasilong Oxford. Ngokubanzi, umsonto uyajiya ngamandla alungileyo nelaphu elijiyileyo, njengeyiloni 210D, 420D kunye ne-840D (eyiklasi ye-FDY). Ipholiyesta 150D, 300D, 600D, 1200D (zezeklasi ye-DTY); Ipholiyesta 210D, 420D (iklasi ye-FDY); I-Taslon 200D × 300D, 400D × 500D (yeklasi ye-ATY), njl.
3. I-Taslon: i-nylon iTaslon, i-polyester Taslon kunye ne-Oxford Taslon. Imeko ngokubanzi: umsonto weft utyebile, umphezulu welaphu uyarhabaxa, kwaye unoluvo lobutyebi kunye nemvakalelo yokujikeleza umqhaphu. Ezifana: nenayiloni taslon
UMnu Zheng (306949978) 10:23:21
70D * 160D * 178T, 184T, 228T, taslon 320D, 640D, taslon Oxford 200D * 300D, 400D * 500D, njl.
4. I-subtextile yasentwasahlobo (i-Pongee): ngokubanzi iyimisonto ye-polyester DTY enelaphu elingarhabaxa (ngaphandle kwe-50D) kunye nesandla esithambileyo, njengoku: i-polyester spring subtextile 75D * 190T, 210T, 240T, 50D * 280T, 290T, 300T, njl. .
5. I-Trilobal: i-nylon taffeta, i-polyester taffeta, i-poly-polyester interlace flash, oko kukuthi, imisonto ephothiweyo njengemisonto ecwebezelayo, enje: yi-flash 70D * 190T, 210T, ipholiyesta flash twill, njl. Warp eyahlukileyo okanye weft njengoko flash silk ibizwa flash enye, kunye warp kunye weft njengoko flash isilika ibizwa ngokuba flash kabini).
I-6, i-Twill (i-Twill): ilaphu lendawo yokutya okuziinkozo kwiTwill, ilaphu le-Twill ngokubanzi ubukhulu be-warp kunye ne-weft. Njenge: i-nylon twill 70D * 210 * 230T, 272T, 290T, ipholiyesta twill 75D * 75D * 230T, 260T, kunye ne-twill exubeneyo.
7.Ukuluka: njenge-brocade / i-polyester interweave (N / T), i-brocade / i-cotton interweave (N / C), i-polyester-cotton interweave (T / C), njl. I-nylon kunye ne-polyester ingaba yi-FDY, i-DTY okanye i-ATY, semi-ezikhanyayo, matte okanye shiny. Phakathi kwabo, umsonto womqhaphu wahlulwe waba yikama ngokubanzi, ulungelelwaniso-lukama, ukame, usenayo imisonto ethile yoqalo.
8. Isikhumba sepesika (Microfiber): ekwabizwa ngokuba yiMicrofiber. Ezifana nesikhumba sephepha lepeyinti 43022 (75D * 240T), 43099 (75D * 150D * 220T), 43377 (twill, 75D * 150D * 230T), njl.
9. I-Satin kunye ne-satin.
10. Ukongeza, kukho i-lattice (Ripstop), i-jacquard (i-Dobby), njl. Njl. Ezenziwa lutshintsho lwezi ntlobo zelaphu zingasentla.
V.Ukuvavanywa kokucaciswa kwelaphu:
Emsebenzini kufuneka kusoloko sinikele ingqalelo ukuchaneka kohlalutyo lwengcaciso, nje ukuba impazamo iya kubangela ilahleko engenakulinganiswa, ngoko ke kufuneka ihlawule ingqalelo ekhethekileyo ekufundeni uhlalutyo lweenkcukacha kunye nocalucalulo, kwaye inake ukufunxwa kwamava emsebenzini , qiniseka ukufezekisa uhlalutyo oluchanekileyo.
1. Iimpawu zelaphu: inayiloni, ipholiyesta, umqhaphu, N / C, T / C, njl.
2. Iipropathi zomsonto: FDY, DTY, ATY, njl.
3. Uhlobo (iimpawu zokubonakala): i-weave ecacileyo, i-twill, isheke, i-satin weave, i-Dobby, njl
A. i-weave plain: i-warp enye kunye ne-single weft, i-warp ephindwe kabini kunye ne-weft ephindwe kabini, i-warp ephindwe kabini kunye ne-warp enye kunye ne-weft ephindwe kabini (intambo ephindwe kabini), njl.
B. twill: 1/2, 1/3, 2/2, 2/3, njl.
D. ye-satin, zingaphi i-wep (okanye i-weft) i-warp (okanye i-weft) edadayo kwaye zingaphi i-weft (okanye i-weft) i-warp (okanye i-weft) icwila kuyo?
E, Dobby ezahlukeneyo, ngakumbi ingqalelo kuhlalutyo lomthetho wokuluka ilaphu.
F. naka ezinye iindlela kunye neempawu.
Ukubala kukaDenny okanye ukubala ngentambo: i-warp, i-weft kunye ne-F ehambelana nokubala.
5, i-warp kunye ne-weft density: qiniseka ukuba uyawuqonda umthetho welaphu lokuluka, inani leenombolo kunye nokubala ukuba zichanekile.
6. Ukukhanya okungaphelelanga, ukucima okanye ukudanyaza.
7. Ububanzi belaphu (jonga ububanzi ngaphakathi okanye ngaphandle komngxuma, kwaye ujonge nobubanzi obusebenzayo bemveliso egqityiweyo emva kokufaka iglu okanye enye into eyenziweyo).
Vi. Ukuhanjiswa kwembewu yesiqhelo (isihlomelo)
Isahluko ii ulwazi olusisiseko lokwenza idayi kunye nokugqitywa kwamalaphu
Inkqubo yokulungisa esisiseko
Ukuhlolwa kwembumba kunye nokunqwenela ukudaya kunye nokomisa ilaphu lembungu, ukugqiba kunye nokulungiswa emva kovavanyo (kubandakanya ukubumba, ukunamathisela, ukuthambisa, ukufaka i-embossing, ukunyathela, ukunamathela i-PVC, isikhumba se-PU, ukudibanisa, ukuthambeka, njl.
Ii. Intshayelelo yenkqubo nganye kunye nolawulo ekugxilwe kulo:
1. Ukuhlolwa kweembumba kunye nelaphu lembungu:
Oko kukuthi, ilaphu elinye lembungu lithungiwe kuLuhlu olukhulu okanye kwibhokisi yeemoto, ebizwa ngokuba yisilinda, inani leSilinda liyahluka ngokokulungiswa kwelaphu.
Ukuhlolwa kombungu ikakhulu kukulawula umgangatho welaphu elingekazalwa ukubona ukuba akukho nto iphosakeleyo njengokuzoba, ifayile yeft, usongeko olufileyo, indawo emthubi, ukungunda, njalo-njalo, kufuneka kuhlawulwe ukujonga ukuba ingaba ilaphu iyahambelana neemfuno. Phantsi kweemeko eziqhelekileyo, inombolo yebhetshi iyafuneka.
A. Ukuze ugcine umsonto ungagudluli ngexesha lokuluka, umsonto unenkqayi, ngoko ke kufuneka uchatshazelwe ngaphambi kokuba udaye umbala.
B. Ukuba ukukhwela akuhlambulukanga, kuya kubakho amabala ombala, amabala e-pulp kunye nezinye iziphene emva kokudaya.
C. Ngokubanzi, emva kokufuna, ilaphu kufuneka lihlanjwe kwaye licocwe, kungenjalo ilaphu elinexabiso eliphezulu le-PH liya kudyobheka kakubi kwaye kwenzeke ezinye izinto ezingaqhelekanga.
Kukho iindlela ezimbini zokuba nesilingo: in-cylinder desizing and long-car desizing. Ngokubanzi, eyangaphambili inesiphumo esingcono sokuqonda, kodwa ukusebenza ngokukuko.
(1) ukudaya imichiza yefayibha:
A. Ubushushu obuqhelekileyo: ngokubanzi bungaphantsi kwe-100 ℃, ubukhulu becala busetyenziselwa ukudaya i-nylon taffeta, i-nylon Oxford, i-nylon twill, njl. Le ndlela kulula ukuvelisa intloko kunye nomsila we-chromatic aberration, ekhohlo, embindini nasekunene. ezinye izinto ezingaqhelekanga.
B. Ubushushu obuphezulu bokudaya roll: iqondo lobushushu ngokubanzi malunga ne-130 ℃, ikakhulu isetyenziselwa ukudaya i-polyester taffeta, i-N66, ilaphu lokulinganisa i-nylon, ipholiyesta ye-Oxford (intambo), njl. Le ndlela kulula ukuvelisa umahluko wentloko nomsila, ngasekhohlo, umahluko ophakathi nendawo nasekunene, umbala, inqaku lombala kunye nokunye okungaqhelekanga.
Ukudaya okugqithileyo: iqondo lobushushu limalunga ne-100 ukuya kwi-130 ℃, ikakhulu isetyenziselwa ukudaya iimveliso zepolyester ezinje ngelaphu lasentwasahlobo, ivelvet yesikhumba sepesika, ipholiyesta yeOxford, itullon, ipolypolyester interweave, njl. I-Polyester textile nayo ingadaywa ngokugqobhoza. Okwangoku, i-nylon kunye nezinye iimveliso ezinemibimbi nazo ziyasetyenziswa ngale ndlela. Le ndlela kulula ukuvelisa umbala weentyatyambo, amanqaku eenyawo zenkukhu, idayiwe ngqo kwaye isongwe. D. i-warp axis bokudaya: zilungele zonke iintlobo zelaphu, kodwa kufuneka zisetyenziswe ngokufanelekileyo ngokweemfuno zomgangatho. Iqondo lobushushu bokudaya linokulawulwa ukusuka kwi-100 ukuya ngaphezulu kwe-130 ℃, ekulula ukuvelisa izinto ezinje ngemiphetho engekho nzulu kunye nolwahlulo lokwahlulahlula.
(2) iindlela zokudaya zamanye amalaphu:
A.Ukudaya umqhaphu: ngokubanzi ukudaya imoto ende (ubuninzi obufunekayo), ukudaya okujikelezayo (ubuninzi okanye ubungakanani obuncinci buvumelekile), ukudaya okuphuphumayo (ubungakanani obuphakathi okanye obuncinci buvumelekile). Iidayi ezisebenzayo (ngokuzila okuhle), idayi ethe ngqo (ngokuzila okungalunganga) kunye needayi zokunciphisa (ezinokukhawuleza okungcono) ziyafumaneka.
B, N / C, C / N bokudaya: ukupeyinta okugqithisileyo kwamkelwa ngokubanzi. Umqhaphu udayiwe kuqala emva koko yinyayi yidaywe. Iidayi ezisebenzayo zisetyenziselwa ukudaya idayi kunye nedayi yeasidi (ngokuzila okungcono) zisetyenziselwa ukudaya inayiloni. Sebenzisa kwakhona idayi ngqo kwidayi (ukungxama okungalunganga).
C, T / C, C / T bokudaya: ukudaya okugqithileyo kwamkelwa ngokubanzi, ipholiyesta yidaywe kuqala emva koko umqhaphu ubotshwe, ipholiyesta yidaywe ngedayi esasazekayo, ikotoni yidaywe ngedayi esebenzayo (ukukhawuleza okuhle). Kukho ukudaya imoto ende, ukudaya, ukusebenzisa idayi ethe ngqo (ukungxama okungalunganga).
(3) ukuhlelwa kwedayi:
A, idayi yeasidi: esetyenziselwa ukudaya amalaphu enayiloni, ngokubanzi ukuya kumbala oqinileyo wokuphucula umbala, kodwa ikwahoya nokukhetha indibaniselwano yedayi kunye nokusetyenziswa kwenkqubo yokudaya efanelekileyo. Iarhente yokulungisa ikhethwe ngokungafanelekanga okanye idosi iphezulu kakhulu kunokubangela ukuba uzive unzima.
B. Ukusabalalisa iidayi: ezisetyenziselwa ukudaya amalaphu e-polyester. Ngokubanzi, ukuhlanjwa kweVAT kufuneka kusetyenziselwe ukuphucula umbala ngokukhawuleza. Ukusasaza idayi kuhlawula ngokukhethekileyo ukuhambisa kunye nokukhawulezisa i-sublimation.
C, idayi esebenzayo kunye nedayi ethe ngqo: zezedayi ezinobushushu obuphantsi.
4. Ukuqwayita ngokubanzi yahlulwe mqengqeleki yokomisa kunye non-contact eyomileyo)
A, akukho kumiswa koqhakamshelwano akukho somisi soqhakamshelwano kunye nomatshini wokubumba, akukho nxibelelwano phakathi kwendwangu kunye nesifudumezi, kuxhomekeke kwisitshizi somoya oshushu kwilaphu ukufezekisa injongo yokomisa. Eyona nto isetyenziselwa ukomisa iimveliso ezidaywe ziphuphume ukuze kugcinwe ilaphu lichumile kwaye lityebile. Iindleko ziphezulu kunokumiswa kwe-roller. B. Ukomisa igubu: ilaphu linxibelelana ngqo negubu, kwaye injongo yokomisa ilaphu kufezekiswa ngokufudumeza igubu. Ubukhulu becala esetyenziselwa bokudaya umqulu kunye neemveliso umqadi umbala bokudaya (ezifana nenayiloni isilika, ipholiyesta, nenayiloni Oxford, ipholiyesta intambo Oxford, njl), inqaba isilika iklasi elide nako kuba ngowokuqala xa isomisa igubu (kodwa kunokuba kuphela kuqala ukomisa ezintandathu, ezisixhenxe zomile ukuze zingabangeli ukuba isandla sibe nzima kakhulu), emva koko uye kumatshini uyokulungisa amanzi ukuphucula amanzi. Iindleko zokumisa ezisezantsi.
5. Uvavanyo oluphakathi:
Uvavanyo oluphambili luya kuvavanya ukungafani kombala kwelaphu kwaye uhoye umgangatho wobuso belaphu, njenge-crease, umahluko wombala (umahluko wombala, umahluko wesilinda, umahluko womgibe), umbala wombala, umbala wombala, ubumdaka, igrisi Ukuzoba iimveliso ezinesiphene zingangeni kwicandelo elisezantsi ukuthintela ukunyuka kweendleko. Emva kokugqiba nokulungisa ilaphu, ezinye iimveliso ezingaqhelekanga azinakulungiswa okanye kunzima ukuzilungisa. C. eli laphu liza kuphinda licwangciswe kwaye lithungwe ngaphambi kokungena kwicandelo elilandelayo.
A. Emva kokugqitywa, iipropathi ezibonakalayo kunye neekhemikhali zelaphu zizinzile. Umzekelo, ukuncipha, ububanzi, i-warp kunye ne-weft density akulula ukutshintsha. Kwangelo xesha, ekugqibezeleni uyilo eli candelo lisenokwenza izinto ezimbalwa ezisebenzayo, kufana nokutshiza amanzi (okungangeni manzi), ukuthamba, kwithala, ukurhafisa idangatye, i-antistatic, amanzi amakhulu (unyango lwe-teflon), ukufunxa ukufuma ukukhupha ukubila , Yilwa ibacteria ukunqanda ivumba ukulinda umzuzwana. B. Ngenxa yobushushu bokuseta okuphezulu, ingqalelo kufuneka ihlawulwe kutshintsho lombala ngaphambi nasemva kokusetwa, ngakumbi imibala enovakalelo, njengombala ongwevu, umbala oluhlaza, ikhakhi ekhanyayo, njl. Njl. . C. ukubumba kunokulawula ububanzi, i-warp kunye ne-weft density, i-shrinkage, njl., Ngakumbi ulawulo lwe-shrinkage, oluchaphazela ngqo iindleko zokuqhubekeka, ke ingqalelo ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe. (Iimfuno inkampani yethu ukuze shrinkage ngokubanzi ukuhlamba shrinkage ka-3%, ngokungqongqo ukuhlamba shrinkage ka-2%). Izinto eziphambili ezichaphazela isiphumo sokubumba bubushushu, isantya kunye nokugqithisa. D. Intshayelelo kwiindidi ezininzi zokwenza:
(1) ukutshiza amanzi ukugqiba uyilo lwelaphu linomsebenzi ongangeni manzi nothuli;
Ukuthambisa ukugqibezela uyilo kwenza ukuba ilaphu liziva lithambile kwaye ligudile, kodwa ke jonga ukuba ingaba ilaphu liya kuthambisa na. Amanzi atshiziweyo kunye neseti ethambileyo inokwenziwa ngaxeshanye, ukwenza ilaphu lingenamanzi kwaye lithambile, kodwa ukuthambisa kuya kuchaphazela amanzi.
(3) intlaka yokuqukumbela uyilo isetyenziselwa ubukhulu becala ilaphu lomsonto oqinileyo kwaye livakale liqinile, enye yentlaka iqulethe i-formaldehyde, kufuneka inike ingqalelo kukhetho; Chela amanzi kunye nentlaka enokwenziwa inokwenziwa ngaxeshanye, kwaye iarhente yokutshiza intlaka inefuthe lokukhuthaza.
Nelangatye nekudodobalisa ukugqibezela uyilo nelangatye nekudodobalisa ilaphu inendima abangabancedani, nelangatye nekudodobalisa nako kwenziwa ngaxeshanye ukugqibezela uyilo lwamanzi, kodwa ukunika ingqalelo ekhethekileyo ekukhetheni arhente yamanzi, kungenjalo isiphumo nekudodobalisa idangatye likhulu kakhulu.
I-Antistatic iqukumbela uyilo lwenza ukuba ilaphu libe nomsebenzi we-antistatic, linokugqibezela uyilo ngamanzi asasazayo ngaxeshanye, kodwa lube nefuthe lokutshiza isiphumo samanzi.
Ukufunxa ukufuma kunye nokubila kugqibezela uyilo ukuze ilaphu likwazi ukufunxa ukubila ngokukhawuleza, ukunxiba iimpahla zemidlalo kunento yokuthuthuzela. Awungekhe uyenze ngamanzi.
Ukusebenza kwe-antibacterial deodorant processing ikakhulu kukuvumela ilaphu elinomsebenzi we-antibacterial, osetyenziswa ikakhulu kwizibonelelo zonyango.
Namhlanje iseti yokuchitha ngaphezulu kwamanzi (ekwabizwa ngokuba lunyango lweteflon): kunokusasaza okuqhelekileyo okusetwa ngamanzi okungabi namanzi, ukungabinathuli, kodwa kunye nomsebenzi wokuthintela ioyile. Ngokubanzi, undwendwe luza kucela i-dupont tag.
7. Calendering kunye nokuncamathelisa:
A, ifuthe lokususa uhlengahlengiso luziva luthambile lwenza umhlaba ukuba ucekeceke ngokuthe tyaba, unciphise umsantsa phakathi kwendwangu yefayibha ukukhusela umphumo okanye ukwenza iglu ifezekise uxinzelelo lwamanzi oluphezulu ukwenza umphezulu weglu usebenze ngokugudileyo nangobuso obuhle bokucofa. isiphumo. Izinto ezintathu zokuhlahlela bubushushu, isantya kunye noxinzelelo. Calendering itshintsha umbala welaphu. C. Iglu ingenza ukuba ilaphu lingangeni manzi, lingabinangqiniseko, lingajiyeki ngumoya kunye neminye imisebenzi, kunye nomsonto oqinileyo kwilaphu, yonyuse inkangeleko kwaye uzive, kwaye ubenze bube nzima, ukuze wenze ilaphu lixabiseke ngakumbi ekusebenziseni. Acrylic (ekwabizwa ngokuba yi-AC, PA), iPU yokuncamathelisa, enokuphefumla kunye nokuncamathela okuvumayo, okunokuqwalaselwa kunamatheliso okucacileyo, ukunamathela okumhlophe, ukunamathela kwesilivere, ukunamathela kombala, ukunamathela kweperile, ukunamathela kwi-uri njalo njalo. Kwakhona ungadibanisa izinto ekrwada ehambelanayo kwi iglu ukuze iye anti-UV, nelangatye nekudodobalisa, anti-tyheli kunye nezinye iziphumo.
E. Nika ingqalelo kulawulo loxinzelelo lwamanzi, uzive (ubukhulu, ukuthamba kunye nobunzima), ukufana kweglu, amandla e-peel, ukumelana namanzi (ubumhlophe), ubumhlophe, njlnjl. Nika ingqalelo umphezulu wamasuntswana e-colloidal, umkhondo, nokuba womile. Ingqwalaselo kufuneka ihlawulwe kwisiphumo sokubambelela kumphezulu wokumisa amanzi (i-PVC strip / PU strip).
I-8, i-PVC yokubopha: naka ukutyeba kokubopha, uzive, uxhuma amandla we-peel, umgangatho wobuso obunamathelayo.
9. Olunye uqhubekeko: iPU eyomileyo (iphepha lokuzahlula), ukudityaniswa, isikhumba sePU, njl.
10. Ukuhlamba: amanye amalaphu omqhaphu, N / C, T / C kufuneka ahlanjwe. Ukuhlamba amanzi kunokwahlulwa kube kukuhlanjwa kwamanzi okuqhelekileyo, ukuhlanjwa kwamanzi okuthambile kunye nokuhlanjwa kwamanzi kwe-enzyme (ukususa iinwele kumphezulu womqhaphu).
11.Ukuhlolwa kokugqibela: jonga umgangatho weemveliso ezigqityiweyo, uzilinganise, uzipakishe kwaye uzilungiselele ukuhanjiswa, kwaye ngokubanzi wenze iirekhodi zokuhlola kunye netafile efanayo. Naziphi na iingxaki kufuneka zibe yingxelo kwangexesha kumthengisi ukuze akwazi ukunxibelelana nomthengi.
Isahluko iii kugxininiswa kumgangatho welaphu
1, ububanzi: ngokubanzi kubhekiswa kububanzi obusebenzayo, oko kukuthi, ububanzi bepinki, okanye emva kobubanzi beglu obusebenzayo.
2, i-warp kunye ne-weft density: iimfuno ezingqongqo kufuneka ziqwalasele umlinganiso we-warp kunye ne-weft density.
3, weft ukugoba: iigridi ilaphu weft iimfuno ukugoba akuyi kuba ngaphezulu kwe-3%, ilaphu plain weft ukugoba akuyi kuba ngaphezulu kwe-5%.
4.Ireyithi yokuncipha: ireyithi yokuncipha kweemveliso ezigqityiweyo kwicala lomgangatho kunye nomda emva kokuhlamba.
5. Isidanga sokutshiza amanzi: I-ISO ilinganiswa ngeedigri (i-50 degrees umahluko ~ iidigri eziyi-100 ezilungileyo) okanye ngenqanaba le-AATCC (umahluko wenqanaba eli-1 ~ amaqondo ama-5 alungileyo). Inqanaba 3 le-AATCC lilingana ne-ISO level 80 degrees.
6, ukukhawuleza kombala: esi sisalathiso esibaluleke kakhulu, siqulathe ukukhawulezisa ukuhlamba (kunye nokuphela kombala ngokukhawuleza, umbala wokukhawuleza), ukukhawuleza okunganyangekiyo kwamanzi (fade, kudyojwe ngombala), ilanga (liphelile) ukukhawuleza kombala kunye nokukrola ukukhawuleza (fumana fade, ibala ngombala), ukukhawuleza ukubila (kuphele, kudyojwe ngombala), ukukhawuleza kwe-sublimation, ukudaya kwephedi, njl.njl., njengoko kulinganiswa kwinqanaba lokwahlulahlula inqanaba (1 ~ 5).
7. Amandla: ukuqina, amandla okondla kunye namandla okuphuka (kg / cm2).
8. Ukuxhathisa uxinzelelo lwamanzi: ukomelela koxinzelelo lwamanzi (isidanga sokungena manzi), njenge-2000mm / H2O (mm ikholamu yamanzi), ixabiso liphezulu, kokukhona ukusebenza kungangeni manzi.
9. Ukungena kokufuma: iyunithi yi-g / M2 * Usuku, ebonisa umgangatho wamanzi odlula kwisikwere semitha esi-1 kwilaphu kwiiyure ezingama-24 kubushushu obuthile kunye nokufuma.
10. Ukuchitheka kweoyile: isalathiso sovavanyo lwelaphu lokulungiswa kwetaflon, lahlulwe laba ngamabanga ama-5 (umahluko kwibakala eli-1 ~ amabanga ama-5 alungile).
11, ukongeza kwintsebenzo yedangatye, i-anti-static, anti-ultraviolet kunye nezinye iimpawu zovavanyo, ezi zifuna umbutho wobuchwephesha ukuba ube nendlela yokuvavanya, apha ayichazwanga.